Hagaajinta SEO ee Slugs WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Hagaajinta SEO ee Slugs WordPress
Hagaajinta SEO ee Slugs WordPress
Waxaa laga yaabaa inaad akhriday ereyga "slug" ee ku jira hagaha WordPress SEO, ama maqaallo leh talooyin ku saabsan hagaajinta taraafikada goobtaada. Laakiin dhab ahaantii ma garanaysaa waxa uu yahay slug? Haddii aadan aqoon u lahayn WordPress ama boggaga internetka fikirkaaga ugu horreeya wuxuu noqon karaa cayayaan beer yar oo caato ah. Si kastaba ha ahaatee, slug WordPress ma aha wax la mid ah.
Maanta waxaan ka jawaabi doonaa dhammaan su'aalaha laga yaabo inaad qabtid oo ku saabsan waxa loo yaqaan 'WordPress slug', sida loo dejiyo ama wax looga beddelo slugs-kaaga WordPress, iyo sida loo isticmaalo slugs-ka SEO si loo qiimeeyo natiijooyinka raadinta. Aan bilowno!
Waa maxay Slug?
Bilawga bilawga, aynu hubino inaad ogtahay waxa uu yahay slug WordPress. Markaad ku abuurto boostada WordPress URL-ka boostada si toos ah ayaa loo sameeyay iyadoo lagu saleynayo cinwaankaaga. Markaa boostada la yiraahdo "WordPress Slugs waa qabow oo madadaalo" waxay u ekaan kartaa:
The slug qaybta ugu dambeysa ee URL "wordpress-slugs-waa-qabow-oo-madadalo".
Waxay ku wareeri kartaa WordPress maadaama permalinkagu yahay URL iyo slug sidoo kale waa URL. Laakiin permalinks iyo slugs ma aha wax la mid ah. Si loo fududeeyo, halkan waa isbarbardhigga labada.
A Permalink waa qaabka url kaaga oo qeexaya sida isku xirka loogu sameeyay mareegahaaga. Permalinks waxaa loo dejiyay si caalami ah Settings> Permalinks.
A slug waa qaybta u dambaysa ee url kaaga ee tilmaamaysa bog gaar ah oo ku yaal mareegaha. Slugs waxa lagu dejiyay bog kasta, boostada ama saldhigga cashuurta.
Sida loo Dejiyo & Wax uga beddelo Slug gudaha WordPress
Beddelka Slugs-kaaga WordPress runtii waa fududahay. Si kastaba ha ahaatee hawshu xoogaa way ka duwan tahay iyadoo ku xidhan waxaad rabto inaad beddesho slug-ga. Waa kuwan dhowr slugs oo caadi ah oo laga yaabo inaad rabto inaad wax ka beddesho.
Markaad sameysato qoraal cusub ama aad wax ka beddesho mid hore waxaad arki doontaa URL-ka permalink ee hoosta ciwaanka. Sida caadiga ah WordPress wuxuu ku dari doonaa cinwaankaaga boostada oo buuxa oo leh dashes buuxinaya meelo bannaan. Kaliya dhagsii badhanka "wax ka beddel" si aad u habayn karto ama u bedesho slug ee boostadaada (sida ugu habboon adiga oo isticmaalaya talooyinka SEO slug ee aan ku taxnay qaybta soo socota).
Si la mid ah qoraallada, marka aad abuureyso bog cusub ama aad tafatireyso mid hore waxaad ka heli kartaa goobta slug ee ka hooseysa cinwaanka. WordPress ayaa si toos ah u buuxin doonta cinwaanka boggaaga oo dhan sidii slug.
Qaybaha caadiga ah waxay isticmaali doonaan "magaca" aad geliso slug ahaan, ama waxaad geli kartaa slug caado ah. Tusaalahayaga sare waxaad ku arki kartaa inaan soo gaabinay qaybta kala duwan ee slug si ay u noqoto kaliya "misc" beddelkeeda. Laakiin badanaa magacyada qaybtaadu waxay noqon doonaan kuwo gaaban oo gaar ah si ay u bilaabaan mana u baahan doontid (ama rabto) inaad beddesho.
Calaamaduhu waxay u shaqeeyaan si la mid ah qaybaha oo waxay u isticmaali doonaan magaca suugista. Dabcan tan waad habayn kartaa, laakiin inta badan lagama maarmaan maaha.
WordPress waxay isticmaali doontaa isticmaaleha qoraaga sida slug ahaan. Tani waa sifada asaasiga ah ee lagu dhisay WordPress. Markaa tusaalaheenna sare, oo wata magaca isticmaale ee “username”, isku xirka qoraagu wuxuu u ekaan lahaa sidan:
Hadda ma jiro hab la dhisay oo wax lagaga beddelo ama lagu habeeyo qoraaga slug aan ahayn abuurista isticmaale cusub oo wata isticmaale cusub. Markaa haddii aad rabto inaad isbeddel ku samayso slugs qoraaga waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho plugin. Mid ka mid ah ikhtiyaari waa plugin Edit Author Slug bilaash ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad beddesho qaabka permalink labadaba (qoraaga / qayb ka mid ah url) iyo sidoo kale slug (magaca isticmaalaha) ee bogagga qoraaga.
Sida SEO loo Hagaajiyo Slugs WordPress
Hadda oo aad fahamtay waxa uu yahay slug iyo sida loo beddelo aan qodno slug SEO. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin degdeg ah oo sahlan oo aad isticmaali karto si aad u ilaaliso slugs-kaaga WordPress nadiif ah oo la hagaajiyo.
1. U adeegso ereyada muhiimka ah ee Slugs
Erayada furaha waa qayb weyn oo ka mid ah SEO, markaa waa inay macno samaysaa haddii aad rabto inaad SEO kor u qaaddo slugs-kaaga waa inaad isticmaashaa ereyada muhiimka ah. Maqaal ku saabsan "Ayeeyada Wayn ee ugu Fiican Roodhida Mooska ee Isticmaalka Muuska Hore" waxay aad ugu dhowdahay in lagu daro ereyga muhiimka ah cuntada mooska mooska haddii url-ku yahay cuntada-muuska-roodhida-roodhida-ka-soo-horjeedka-ayeeyo-awow-iyo-karinta-loo-isticmaalka-mooska-hore.
2. Ka dhig Slugs gaaban oo ku habboon
Si fudud u dhig oo ilaa heerka. Waxaad rabtaa url slug kaaga inuu u fududaado in lagu xasuusto akhristayaasha haddii ay rabaan inay ku xidhaan, iyo sidoo kale inay u fududahay bots-ka raadinta raadinta marka ay gurguuranayaan goobtaada. Slug waa inay la xiriirtaa cinwaankaaga boostada iyo ereyada muhiimka ah ee bartilmaameedka - midkoodna waa inuu dheereeyaa si kastaba.
3. Ka saar Buuxiyaha aan loo baahnayn (ama Jooji) Erayada sida "the", "is" iyo "a"
Adigoo raacaya barta ugu dambeysa, waxaad si fudud u gaabin kartaa slugs adiga oo ka saaraya ereyada joogsiga ama erayada aan loo baahnayn. Ka fakar in aad far gaaban ku qoran tahay - kaliya ilaali erayada aad u baahan tahay si aad fikradaada u fahanto. Tani waxay la macno tahay in laga takhaluso ereyada sida: the, if, iyo, ama, laakiin, sida, leh, iwm.
Tusaale ahaan, waxaanu soo gaabinay boostadayada "SEO Optimization for WordPress Slugs" si aan u isticmaalno "wordpress-slugs-seo" slug. Waxaan meesha ka saarnay "la hagaajiyey" maadaama aanaan dareemeyn inay lama huraan tahay iyo "for" maadaama uu yahay kelmad buuxinaysa.
4. Ka fogow inaad bedesho Slugs mustaqbalka
Markaad daabacdo qoraal, bog, qayb ama wax kale waxa fiican inaad ka tagto uun. Isbeddellada lagu sameeyo slugs-kaaga mustaqbalka waxay keeni kartaa 404 khalad haddii aadan si sax ah u hagaajin url-kaagii hore urlkaaga cusub.
Waxaan rajeyneynaa in hagahayagu uu kaa caawiyay inaad si fiican u fahamto waxa uu yahay WordPress slug, sida loo dejiyo oo wax looga beddelo slugs WordPress ee macluumaadkaaga, iyo sida runtii SEO loo hagaajiyo slugs WordPress. Talooyinkan waa inaad awood u yeelatid inaad si dhab ah u wanaajiso url-kaaga bogga SEO:
Isticmaal ereyo muhiim ah
Jilbalada ka dhig mid gaaban
Ka saar ereyada buuxinta (ama joojinta) aan loo baahnayn
Iska ilaali inaad beddesho slugs
Laakiin haddii aad qabto wax su'aalo ah oo kale oo ku saabsan slugs WordPress, ama haddii aad leedahay talooyin adiga kuu gaar ah ama qalab hagaajin slug oo aad u malaynayso in aan ku daro noo soo sheeg. Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno
Sida loo kaydiyo kaydka Gmail kaaga oo dhan
20ka ugu Fiican Maaraynta Xayeysiiska WordPress Plugins 2021